» “अस्पतालमा धनीले दिन चाहान्छ्न भने दानपेटिका राखौं” तर सबै पीडितलाइ निःशुल्क उपचार गरौं।डा. बाबुराम भट्टराई ,ताली या गाली? “अस्पतालमा धनीले दिन चाहान्छ्न भने दानपेटिका राखौं” तर सबै पीडितलाइ निःशुल्क उपचार गरौं।डा. बाबुराम भट्टराई ,ताली या गाली? – हाम्रो खबर
“अस्पतालमा धनीले दिन चाहान्छ्न भने दानपेटिका राखौं” तर सबै पीडितलाइ निःशुल्क उपचार गरौं।डा. बाबुराम भट्टराई ,ताली या गाली?
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा (जसपा)का संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार अहिलेको अवस्थामा कोरोना पीडितको निःशुल्क उपचार गर्नबाट पन्छिन खोज्नु गैरजिम्मेवार, चरित्र हिन भएको बताएका छन् ।
नागरिक सरकारको भरोसामा बसेका छन्, तर सरकारले नागरिक माथि यस्तो हर्कत गर्नु भनेको सरकार गैर जिम्मावर हुनु बताएका छन्। डा. भट्टराईले बुधबार (आज) बिहान सामाजिक सञ्जालमा एक ट्वीट गर्दै पैसा अभाव भएको भए अस्पतालमा दा’नपात्र राख तर सबै संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जनताको ज्यान जोगाउनका लागि सरकारले अरु सबै खर्च रोक्नुपर्ने भट्टराईको माग छ। यसरी लेखेका छन् डा.भट्टराईले, ‘कोरोना पीडितलाई निःशुल्क उपचारको दायित्वबाट भाग्नु सरकारको गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा हो । यसले महामारी झन् विकराल बन्नेछ ।
यो पैसाको अभावले हैन, जनताको ज्यान जोगाउन अरू सबै खर्च रोके हुन्छ, भ्रष्टाचार/फजुल खर्च रोके पुग्छ । अस्पतालमा धनीले दिन चाहे दानपात्र राखौं तर सबैलाई निःशुल्क गरौं।
घर-डेरामै सीमित रहेर दशैँ मनाउन सभापति देउवाकाे आग्रह
काठमाडाैँ : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले घर—डेरामै सीमित रहेर पर्व मनाउन सबै नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा अनुरोध र अपील गर्नुभएको छ ।
उहाँले विजया दशमीका अवसरमा आज सन्देश दिई स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीमा शुभ–कामना व्यक्त गर्दै कोभिड–१९ को सं’क्रमणप्रति सचेतता अपनाई मठमन्दिर जाँदा मास्क अनिवार्य लगाउन र भौतिक दूरी कायम राख्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले सामाजिक सांस्कृतिक पर्व मनाउँदा आफू र आफ्नो परिवारलाई सुरक्षित राख्न अपिलसमेत गर्नुभएको छ । सभापति देउवाले शुभकामना सन्देशमार्फत विजयादशमीले समुदाय, संस्था, परिवार र व्यक्तिव्यक्तिबीचको एकतालाई अझ मजबूत बनाउँंदै आएको र बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विजयादशमीका अवसरमा सभापति देउवाले आफू र कांग्रेसका तर्फबाट स्वदेश तथा विदेश रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।